शेयरबजारको उतारचढावसँग आफूलाई नजोड्न अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह
काठमाण्डौ - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शेयरबजारको उतारचढावसँग आफूलाई नजोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्तिको अनुहार हेरेरभन्दा पनि पूँजीबजारमा कम्पनी हेरेर लगानी गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । खतिवडाले लगानीकर्ताले बैङ्कको नीति...
'लाइसेन्स होल्ड' गर्नेमाथि निर्मम कारबाही गर्न मन्त्री खतिवडाको निर्देशन
अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स होल्ड गरेर काम
पुँजीबजार संकटको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुन् त ?
२०७२ सालको भूकम्पले हल्लाउन नसकेको सेयर बजार पछिल्लो समयमा हल्लिरहेको छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको देखिन्छ । कतिपय सेयरधनीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा सेयर बजार ओरालो लाग्नुको जिम्मेवार अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई मान्ने गरेका छन् । त्यसो त नेकपाको बलियो भनिने सरकारको अर्थमन्त्री बनेको डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री बनेदेखि नै बेला–बेलामा सेयर बजारका बारेमा दिने अभिव्यक्तिले सेयर बजारमा तरंग ल्याउने गरेको छ । डा. खतिवडाले दिने गरेको अभिव्यक्तिले सेयर बजारमा खति मात्र हुने गरेको पनि सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको राजिनामा माग गर्दै शेयर लगानीकर्ता अनशनमा, 'पूँजी बजारमैत्री अर्थमन्त्री :: BIZMANDU.COM
पुँजी बजार एक्स्पोमा के के भने अर्थमन्त्रीले ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका भनाईले सेयर बजार नै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। जुन स्वभाविक हो। सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु अर्थमन्त्रीका भनाईबाटै अनुमान लाग्ने भएकाले अभिव्यक्तिलाई लगानीकर्ताले चासोपूर्वक लिने गरेका छन्। सेयर बजारका सम्वन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाका अभिव्यक्तिलाई लगानीकर्ताले आ–आफ्नै तवरले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डले रजत जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरेको पुँजीबजार एक्स्पोमा उनले दिएका…
१६ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा स्वेत पत्रको सारंश प्रस्तुत गर्दै सेयर बजार सतही रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालको पुँजी बजार सतही रहनुका साथै, अर्थतन्त्रको दायरा बढाउन पुँजी बजार सशक्त माध्यम भएपनि धितोपत्र बजारमा मात्र सिमित छ,’ अर्थमनत्री खतिवडाले भने । उनले पुँजी बजार मार्फत स्वलगानीको लागि …